ဖုန်းကနေ အသံကိုနားထောင်ပြီး ကြော်ငြာတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ Mark Zuckerberg
11 Apr 2018 . 2:40 PM
Facebook အသုံးပြုနေသူတိုင်း အနည်းနဲ့အများ ပြောနေမိတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နေ့စဉ်စကားပြောနေတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောနေတဲ့စကားတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတွေကို Facebook Newsfeed မှာ မကြာခင်တွေ့လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် အဖြေကိုတော့ အခု Cambridge Analytica ကုမ္ပဏီကနေ Facebook App ကို အသုံးပြုပြီးတော့ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ခိုးယူမှုအပေါ် အမေရိကန် ဆီနိတ်လွှတ်တော်မှာ Facebook ရဲ့ CEO Mark Zuckerberg က ဖြေကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုမေးခွန်းကို ဆီနိတ်တာ Gray Peters (D-MI) က မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook ကနေ ကြော်ငြာတွေအတွက် Mobile Devices တွေရဲ့ Microphone ကနေ အမြဲတမ်းအသံတွေကို နားထောင်နေသလားဆိုတာကို “Yes” or “No” ဆိုပြီး မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် Mack Zuckerberg ကတော့ “No” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပြီးတော့ Facebook က ကြော်ငြာတွေအတွက် Microphone ကနေ အသံကို နားထောင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ Facebook ကနေ Microphone Permission ကို ရယူတယ်ဆိုတာက ဗီဒီယို ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အသံတွေကို ဖမ်းယူဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Mack Zuckerberg ကိုယ်တိုင်က အခုလိုမျိုးငြင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် Facebook မှာမြင်ရတဲ့ ကြော်ငြာတွေက ကိုယ်ပြောနေမိတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ရင်တောင် တိုက်ဆိုင်တာလို့ပဲ ယူဆရမှာလား?
Facebook အသုံးပွုနသေူတိုငျး အနညျးနဲ့အမြား ပွောနမေိတဲ့အရာတဈခုရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ နစေ့ဉျစကားပွောနတေဲ့အခါ ကိုယျပွောနတေဲ့စကားတှမှော ပါဝငျတဲ့ ဒါမှမဟုတျ နီးစပျတဲ့ ကုနျပစ်စညျးကွျောငွာတှကေို Facebook Newsfeed မှာ မကွာခငျတှလေ့ာရတာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ အဖွကေိုတော့ အခု Cambridge Analytica ကုမ်ပဏီကနေ Facebook App ကို အသုံးပွုပွီးတော့ လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ခိုးယူမှုအပျေါ အမရေိကနျ ဆီနိတျလှတျတျောမှာ Facebook ရဲ့ CEO Mark Zuckerberg က ဖွကွေားလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
အခုမေးခှနျးကို ဆီနိတျတာ Gray Peters (D-MI) က မေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ Facebook ကနေ ကွျောငွာတှအေတှကျ Mobile Devices တှရေဲ့ Microphone ကနေ အမွဲတမျးအသံတှကေို နားထောငျနသေလားဆိုတာကို “Yes” or “No” ဆိုပွီး မေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ Mack Zuckerberg ကတော့ “No” လို့ ဖွကွေားခဲ့ပွီးတော့ Facebook က ကွျောငွာတှအေတှကျ Microphone ကနေ အသံကို နားထောငျခွငျးမရှိကွောငျးနဲ့ Facebook ကနေ Microphone Permission ကို ရယူတယျဆိုတာက ဗီဒီယို ရိုကျကူးတဲ့အခြိနျမှာ အသံတှကေို ဖမျးယူဖို့အတှကျပဲဖွဈတယျလို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
Mack Zuckerberg ကိုယျတိုငျက အခုလိုမြိုးငွငျးဆိုခဲ့တဲ့အတှကျ Facebook မှာမွငျရတဲ့ ကွျောငွာတှကေ ကိုယျပွောနမေိတဲ့ အကွောငျးအရာဖွဈရငျတောငျ တိုကျဆိုငျတာလို့ပဲ ယူဆရမှာလား?